:::: Xaalada aammaanka ee Kismaayo oo loo caal waayay ::::
Xaaladda Ammaan ee Kismaayo oo Loo Caal Waayay
Dhaca iyo dilka loo gaysanayo dadka shacabka ah ee ku dhaqan gudaha magaalada kismaayo iyo nawaaxigeeda ayaa baryahan sii badanaya kadib markii loo caal waayay wax ka qabashada xaalada amaan ee magaalada kismaayo
kismaayo soomaaliya | SomaliTalk.com
Waxaa shalay galinkii danbe dhintay hal qof waxaana si xun loo dhaawacay labo qof kadib markii uu nin maleeshiyo ah oo hubaysan uu tacshiirad ku furay gaari caasi ah oo marayay wado ku taala xaafada isku filan ee magalada kismaayo.
Ninka tacshiirada ku furay gaariga ayaa waxa uu ahaa nin maleeshiyo ah oo hubaysan ayadoon lagaranayn sababta dhabta ah oo uu ninkaan ugu furay rasaasta gaarigan, ayadoo labadii qof ee ku dhaawacantay shilkaas loola caray isbitaalka guud ee magaalada kismaayo, islamarkaana hada ay xaaladooda caafimaad wanaagsantahay.
Hadaba waxaa haatan laga cabsi qabaa in ay fal aar gudasho ah ku dhaqaaqaan beeshii uu ka dhashay qofkaasi shalay dhintay ayadoo ilaa iminka ay socoto waan waan laga dhex wado labadaasi beelood, sidoo kale waxaa iyana shalay hal qof lagu dilay magaalada kabsuuma oo saqaashan kiloomitir u jirta magaalada kismaayo waxaana lagu soo waramayaa in uu falkaasi geestay nin maleshiyo ah.
Dhanka kale waxaa shalay dhac loogu geestay gudaha magaalada kismaayo ilaa sadex baabuur oo ah nooca loo yaqaan BL-ka, gawaaridaan ayaa waxaa qaarkood loo dhacay hab aargoosi halka kuwa kalana ay dhaceen rag dableey ah oo hubaysan waxaana rintaan ay saamaysay dhamaan dadwaynaha ku dhaqan magaalada kismaayo iyo nawaaxigeeda.
Iskusoo wada duuboo dilka iyo dhaca loo gaysanayo dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada kismaayo iyo nawaaxigeeda iyo isbaarooyinka yaala gudaha magalada ayaa waxay sii kordhinaysaa cabashadii iyo cabsidii ay ka qabeen dadka rayidka ah ee ku dhaqan gobolka jubbada hoose gaar ahaan magaalada kismaayo.
Sagaal Doonyood iyo Labo Markab oo Kismaayo Dhuxul ka Qaadi lahaa.. ::: ...oo Maleeshiyo Isbaarooyin dhigtay waddooyinka waaweyen ee magaalada kismaayo ay ka Xanibeen in xamuulka laga dejiyo oo Dhuxul loogu raro Khaliijka... Guji.... Nov 28
Beeshaas ayaa soo sharax Dr. Maxamed Cumar Nuur in uu matalo beesha oo uu yahay ninka keliya ee... Guji... Nov 28
Isimada Puntland ayaa maanta Baaq nabadeed ka kooban shan qodob ka soo saaray Garoowe kaas oo.. Guji.. Nov 28